अनौठा कुरा Archives - Sawal Nepal
अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्न लागिएको लाश चौराहामा चिया पिउँदै गरेको भेटिएपछि…
काठमाडौं। सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक व्यक्तिको शव अस्पतालमा थियो । शवको पोस्टमार्टम गर्ने तयारी भइरहेको थियो । त्यही बेला पोस्टमार्टम गर्न लागिएका मृतक सडकको चौराहामा चिया पिउँदै बसेको खबर आएपछि एकाएक हल्लाखल्ला भयो । भारतको उत्तर प्रदेशको देवरियामा यो विचित्र घटना भएको हो ।खासमा त्यहाँ सडक दुर्घटनामा एक व्यक्तिको मृत्यु भयो । उनको सनाखतपछि
भारतका एक मन्त्री महिला शौचालयबाट निस्किएपछि(भिडियोसहित)
भारतमा एक पुरुष मन्त्री महिला शौचालयबाट निस्कँदै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि उनी निकै आलोचित बनेका छन् । भारतको राजस्थान राज्यका उद्योग मन्त्री परसादीलाल मीणा महिला शौचालय प्रयोग गरेपछि विवादित बनेका हुन् ।सामाजिक सञ्जालतिर भाइरल भएको भिडियो १९ सेकेण्डको छ । त्यसमा मन्त्री परसादीलाल एक शौचालयबाट हात धोएर बाहिर निस्कएको देखिन्छ । उनी निस्कएको शौचालयको माथि
६२ वर्षको उमेरमा पनि यस्तो तन्नेरी, के छ राज ?
एजेन्सी– उमेरसँगै यसको असर शरीरलाई पनि पर्छ । धेरैजसो मानिसको वृद्धावस्थामा शरीरिक क्षमता कम हुन्छ । तर लस एन्जेलिसमा बस्ने ६२ वर्षकी महिला एकदमै तरूनी जस्तो देखिन्छिन् । लेस्ली कार्लटन नाम गरेकी उनको बास्तविक उमेर ६२ वर्षको भयो । तर, उनी ३५ जस्तो उमेरकी देखिन्छन् । उनी छोरासँग हिँड्दा प्रेमीका जस्तो देखिन्छिन् । उनी आफूलाई
काठमाडौँ– सुन्दै पनि पत्यार लाग्न नसक्ने घटना संसारको विभिन्न स्थानमा भइरहेका हुन्छन् । हुन पनि यो संसार अनौठो रहस्यले भरिएको छ । आज हामी यस्तै एउटा अनौठो कुराको बारेमा आज हामी तपाइँलाई जानकारी दिँदैछौँ । भारतको एउटा गाउँमा अनौठो परम्परा रहेको छ । जहाँ अन्धविश्वासका कारण महिलाहरु पाँच दिनसम्म निर्वस्त्र रहन्छन् । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको
श्रीमतीको १६ जनासँग अवैध यौन सम्बन्ध, श्रीमानले सबै १७ जनासँग एकैचोटी लिए बदला
काठमाडौं। आफूलाई धोका दिएर परपुरुषसँग अवैध सम्बन्ध राख्ने श्रीमती र उनका १६ जना ब्वाइफ्रेण्डसँग श्रीमानले एक झट्कामा यसरी बदला लिए कि अहिले उनको सर्वत्र तारिफ भइरहेको छ । घटना जिम्बाब्बेको राजधानी हरारेको हो । एर्करिडाइस मकोमो र मुनशे चारलेन नेकुबको विवाह भएको ४ वर्ष भइसकेको छ । जिम्बाब्बेको प्रमुख वेबसाइट आइहरारेका अनुसार मकोमो विगत केही
२३ वर्षमा ११ बच्चाकी आमा बनेकी क्रिस्टिनाको १०५ बच्चा जन्माउने लक्ष्य
एजेन्सी । रुसकी एक युवती २३ वर्षको उमेरमा ११ बच्चाकी आमा बनेकी छन् । क्रिस्टिना ओज्टर्क नामकी युवतीले १७ वर्षको उमेरमा पहिलो बच्चा जन्माएकी थिइन् । बाँकी बच्चा भने उनका ५६ वर्षीय पति गैलिप ओज्टर्कका तर्फबाट सरोगेसि माध्यमबाट जन्मेका हुन् । ओज्टर्क दम्पत्तीले १०५ बच्चा जन्माउने लक्ष्य राखेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । उनीहरुले सबै
छ वर्षीय छोराको रुप देखेर शम्भु सोध्छन्, ‘दुई लाख खर्चिँदा पनि निको भएन, के रोग लाग्यो कृष्णालाई?’
वीरगंज : पर्सा, पोखरीया वडा नं ६ श्रीसिया(डिह टोला) का कृष्णाको शरीर केही महिनायता अस्वभाविक रुपले बढ्न थालेको छ। शम्भु हजरा दुसाधका ६ वर्षीया छोरा कृष्णालाई बेलाबेला पेट दुख्ने समस्याले पनि सताउँछ।१० महिनायता पेट दुख्ने र शरीर सुनिने समस्या बढ्दै आएको शम्भुले बताए। कृष्णा अहिले यति मोटाउँदै गएका छन् की उनको आँखा ढपक्कै ढाक्ने गरी
भ्यालेन्टाइन डेका दिन एक महिलासँग भेट्दा आफ्नो गु’प्तां ग ठू लो होस् भन्ने चाहनाले एक युवकले आफ्नो गु प्तां गलाई स्टि लको रिं गभित्र छि राए । तर, यसो गर्दा उनको गोप्य अंग २ दिनसम्म ख’त’ रनाक तरिकाले सुन्निएपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याउनुपरेको छ । द सनको रिपोर्टअनुसार थाइल्याण्डको राजधानी बैंककका यी युवाले डाक्टरहरुसँग आफूले
मंगल ग्रहमा नूनिलो चीज खाँदा प्यास घट्छ, भोक बढ्छ !
मंगलग्रहका लागि कृत्रिम मिसन तयार गर्ने क्रममा गरिएको अध्ययनमा शोधकर्ताहरूले नूनिलो कुरा खाँदा प्यास घट्ने र भोक बढ्ने पत्ता लगाएका छन् । त्यहाँ ऊर्जाको अधिक आवश्यकताका कारण यस्तो हुने उनीहरूले पाए । कृत्रिम मिसनमा बढी नूनिला खानेकुरा खाने अन्तरिक्ष यात्रीको शरीरमा पानी अत्यधिक देखियो । उनीहरूलाई प्यास लागेन तर ऊर्जा धेरै आवश्यक भयो । जर्मनीको
पूर्व प्रेमीबाट पैसा झार्न ९ महिनासम्म पेट देखाउँदै गर्भवती भएको नाटक गरेपछि …
मान्छेले प्रेममा परेर के–के गर्न सक्छन् ? पूर्व प्रेमीलाई सताउन ९ महिनासम्म गर्भवती भएको नाटक गर्ने एक महिलालाई स्कटल्यान्डको अदालतले सजाय तोक्ने भएको छ । त्यहाँकी जैकलीन मेकगोवन नामक महिलाले पूर्व प्रेमी जेमी इतकेनलाई सताउन गर्भवती भएको नाटक गरेकी थिइन् । यो नाटक प्रेमी जेमीसम्म मात्रै सीमित रहेन, जेमीकी आमा र घरपरिवारसम्म पुग्यो । आफू